tenda kana kwete, apple & apos; s iphone 11 ndeyemahara izvozvi pakutenga zvakanyanya nezvikamu
Kuru Nhau & Ongororo Uchitende kana kwete, Apple & apos; s iPhone 11 yakasununguka izvozvi kuBest Buy nezvikamu
Uchitende kana kwete, Apple & apos; s iPhone 11 yakasununguka izvozvi kuBest Buy nezvikamu
Apple iri kuva nayo hapana dambudziko kuvatengesa & apos; yakajairwa 'iPhone 11 akasiyana kunge hotcake mwedzi yakati wandei mushure mekuburitswa kweiyo nyowani yeIOS handset mhuri, asi izvo hazvireve kuti zvinoreva vamwe vatakuri uye vatengesi havadi zvinopihwa zveapo neapo kusimudzira kwavo kwega kuita. Iyo iPhone 11 Pro vs iyo iPhone 11, ndeipi yaunofanira kuenda?
Nyaya iripo, kusimudzira kwazvino kubva kuSprint uye Best Buy iyo inokutendera iwe kuti unyore zviyero 6.1-inch Apple A13 Bionic-inofambiswa yemahara. Ehezve, hapana & maapos akamboreruka seizvozvo, saka haufanire kushamisika kunzwa kune tambo dzakawanda dzakanamatira kune iyi zvimwe isingatendeke dhiri.
Tarisa uone dhiri apa
Nechimwe chinhu, iwe & apos; zviri pachena kuti unofanira kubvuma kubhadhara nharembozha & maapos s mitengo muzvikamu zvepamwedzi. Asi nekuti isu & apos; tiri kutaura nezve nhare yakasununguka ... pakupera kwezuva, zvinoreva kuti iwe & apos; uchazopihwa zvikwereti zvemabhiri mazuva ese makumi matatu anofukidza huwandu hwekutengesa hweiyo 64GB iPhone 11 kumisikidzwa mushure memakore maviri. Mune mamwe mazwi, huwandu hwakazara hwemazana mazana manomwe emadhora hunodzoserwa kuaccount yako nenzira yezvikwereti makumi maviri nemana zvemadhora 29.17 pop.
Kechipiri uye pamwe zvakanyanya kukosha, iwe & apos; iwe uchafanirwa kunge uri mutsva wekuSprint zvachose kana munhu aripo anoda kuvhura mutsara mutsva webasa pamwe nenyika & apos; yechina-yakakura nharembozha opareta kuti ikwanise Best Buy & apos; s bargain. Asi izvo & & apos; zvakanyanyisa, izvo zvinoreva kuti hapana vekutengesa-ins vanobatanidzwa kana chero imwe mhando yebhizinesi rinosetsa. Uye kwete, chibvumirano iwe & apos; kutarisisa kusaina hachisi chisi. Iyo & apos; yakanaka yechinyakare dhizaini yekubhadhara zano, panoperera iyo iwe unenge uine yako 'yemahara' iPhone 11.
Iwe unogona kunyange kusarudza kubva kune yakawanda yemapendi mabasa akanyorwa seanowanikwa zvese online uye isingaenderane panguva yekunyora uku, kubva kune dema kuenda kugirini, yepepuru, tsvuku, uye yero. Ramba uchifunga mupfungwa iPhone 11 ndiyo yakazvininipisa ruoko Apple yakaburitswa kumashure munaGunyana, iine maviri chete-akatarisa kumashure makamera mu tow, LCD pani yemitambo resolution ye 1792 x 828 pixels, aruminiyamu furemu pachinzvimbo cheyakaomesesa simbi isina kuvaka, uye saizi yebhatiri kusiya zvishoma kudiwa.
Asi iyo yambotaurwa mamiriro-e-iyo-hunyanzvi A13 Bionic processor, masipika, software, kumeso kumeso, uye hongu, kunyangwe iyo mbiri cam system yakaita iyo 6.1-inch iPhone 11 chibvumirano chakadzikama chaipo kubva pabhati pa $ 700, zvinoreva kuti kugona kusabhadhara chero chinhu nhasi nekusvetuka hoops akati wandei ndiyo dudziro yebhuku yemumwe mukana-we-mu-hupenyu.
foni inotengesa zvakanyanya pasi rose
kupi kutenga pixel 4a
obama anoshandisa foni ipi
Kukanda Android skrini kuPC yako imhepo mukati Windows 10 Anniversary Kugadziridza
HTC inovavarira Ndira 25 kuti itange kutumira Android 6.0 kuT-Mobile HTC One (M8)
Apple Watch Series 4 inobata paB & H Photo Vhidhiyo ine uye isina maseru tsigiro
Samsung Galaxy S6 uye S6 Edge mutengo uye zuva rekuburitsa
Galaxy S8 & apos; s isinganzwisisike FM redhiyo inoshanda seyechirango, taura T-Mobile, Verizon uye AT & T subs
Samsung Galaxy A6 (2018) Ongororo
Sphero Star Wars BB-8, BB-9E, & R2D2 maoko-on: smartphone-inodzorwa droids
Apple AirPods bhatiri hupenyu bvunzo mhedzisiro: anogara kwenguva yakareba sei?